Maitiro ekuisa watchOS 6 pane yedu Apple Tarisa | Ndinobva mac
Maitiro ekuisa watchOS 6 pane yedu Apple Watch
Iyo itsva OS yeApple Watch iri kuuya mumaawa mashoma uye isu tese tinoda kuyedza nhau idzo nyowani vhezheni yeOS yewachi inounza. Chero zvazvingava chinhu chakakosha izvozvi usamhanye sezvo takamirira nguva yakanaka kusvikira nhasi, saka hapana kumhanya izvozvi zvave pano ...
Masikati ano tichaona dzese nhau dzichisvika kune inoenderana Apple Watch mamodheru uye avo vakaisa iyo beta vhezheni pawatch, unogona kusarudza kudzima maprofiles nekumisikidza yekupedzisira vhezheni kana kuenderera muchirongwa chebeta sezvo kazhinji ari iwo akafanana shanduro dzekupedzisira mune beta fomu. Chaizvoizvo chakakosha kuona kuti sei isa new watchOS 6 pane wachi uye zvino tichaona maitiro ekuzviita.
Tinogona kutaura kuti iyo watchOS yekuvandudza iri nyore kwazvo senge mamwe maApple software shanduro uye kuti kune mashoma uye mashoma mabasa ekuita mune izvi zvigadziriso. Vazhinji vashandisi vanosarudza kuita yakachena kuisa kubva pakutanga pane wachi dzavo, asi ichi chinhu chiri kudzikira uye vashoma vanozviita. Chero zvazvingaitika, izvo zvatichaona izvozvi mune ino dzidziso ndiko kuiswa kweWatchOS 6 pamusoro peshanduro yazvino, ichi hachisi chitsidzo chakachena pane wachi saka chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kuziva ruzivo urwu. Kunyangwe kana zvisiri izvo zvakakosha kuti uite yekudzokorora kubva pakutanga paApple Watch kunoenderana pane imwe neimwe, kana wachi ikasakupa matambudziko iwe unogona kungoisa iyo nyowani vhezheni iyo Apple ichatanga mumaawa mashoma anotevera. Takatanga!
1 Negadziriro yeparutivi kunokosha kana usingade kurasikirwa mashoko
2 Pfungwa dzekufunga usati watanga kugadzirisa iyo wachi
3 Iyo yekuvandudza inosvetuka otomatiki pane yedu iPhone
4 Ko kana ndine iOS kana watchOS beta yakaiswa?
Negadziriro yeparutivi kunokosha kana usingade kurasikirwa mashoko
Backups anogara akakosha pane zvese zvishandiso uye Apple Watches zvakare. Apple inoita kuti zvive nyore kwatiri mupfungwa iyi sezvo isu tisingafanire kuita chero chinhu kuti tigadzire kopi yewachi yedu, hongu, isu tinofanirwa vane nzvimbo yakakwana muICloud kana sevhisi yatinoshandisa kwariri.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuve nechokwadi chekuti iCloud yakatsigira data redu sezvo isu tisingade kuisa panjodzi yekurasa chero chinhu kana tichigadzirisa kana kuisa vhezheni itsva yeOS kubva pakutanga. Izvi zvinowanzoitika otomatiki uye iyo paired iPhone inotora otomatiki backups, saka unogona kudzoreredza iyo Apple Watch kubva kune backup chero paunoda asi nhasi zvatinoita vazhinji vedu kuisa pamusoro pasina kudzoreredza wachi sezvo ichishanda mushe uye isingape matambudziko. Paunosimudza yako iPhone kuICloud kana iTunes, zvakare inosanganisira yako Apple Watch data.
Pfungwa dzekufunga usati watanga kugadzirisa iyo wachi
Iyo iPhone inofanirwa kunge iri kusvika parizvino saka tinogona kuisa iyo itsva watchOS. Hongu, chishandiso chedu chinofanirwa kuve neiyo yazvino vhezheni yeIOS uye kana tangova neshanduro iyi yakaiswa pane iyo iPhone tinogona kuenderera nekuisa iyo WatchOS vhezheni pane yedu Apple Tarisa.
Tinofanira kuva wachi iri muchaja uye kuti ine inokwana 50% bhatiri kuitira kuisa. Kana tangove neiyo iPhone yakagadziridzwa, isu tinofanirwa kuyeuka kuti bhatiri reawa rinobhadhariswa kuti tizvivandudze pachedu Imwe pfungwa yakakosha ndeyekuti isu tine iyo iPhone zvakabatana neWiFi network uye kuti zvese zvishandiso zviri padhuze nepadhuze, nenzira iyi unogona kutanga neyekuvandudza wachi.
watchOS 6 inoda iPhone 6s kana gare gare neIOS 13 kana gare gare, uye Apple Watch Series 1 kana gare gare. Sezvakaitika neiyo watchOS 5 vhezheni, iyo nyowani vhezheni iri pachena haienderane nechizvarwa chekutanga Apple Watch inotaurwa nevakawanda seSystem 0.
Iyo yekuvandudza inosvetuka otomatiki pane yedu iPhone
Kana zvese zvaitika chokwadi iyo nyowani vhezheni inosvika yega. Ndizvozvo, iyo vhezheni itsva yewatchOS 6 inozviratidza otomatiki pane yedu iPhone mune yeWatch app uye isu tinongofanirwa kuwana iyo application pachayo uye tinya pane Wangu wachi, wobva waGeneral uye Software kugadzirisa.
Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira kusvikira iyo nyowani vhezheni yadzorwa. Inogona kukumbira iyo iPhone kana Apple Watch kodhi, isu tinongoiwedzera uye ichaenderera neyekuita otomatiki. Kana vhiri rekuenderera richipera paawa, iyo yekuvandudza ichave yakakwana, iko kushanda kunogona kutora zvakati kana zvishoma zvichienderana nekubatana kwatinako. Panguva ino hatifanirwe kubvisa wachi kubva mundiro usatangisezve iyo iPhone kana kubuda iyo Apple Watch app.
Kana iko kugadzirisa kwapera, Apple Watch inotangazve otomatiki.
Ko kana ndine iOS kana watchOS beta yakaiswa?
Kazhinji, iyo vhezheni nyowani hairatidzike sevamwe vashandisi uye zvingangoita kuti iwe uchitova newazvino vhezheni yakaiswa pamakomputa ako, ehe iwo mabheta. Ichi chinhu chinowanzoitika kune vazhinji vashandisi kana vaisa beta vhezheni uye kana iwe uchida iyo nyowani uye yazvino vhezheni kuti ioneke nenzira yechimiro iwe uchafanirwa bvisa beta mbiri kubva pachigadzirwa.
Para tarisa uye bvisa ma profiles izvo zvatakaisa, iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Isu tinovhura iyo Apple Watch app pane iyo iPhone, bata iyo Yangu yekutarisa tebhu uye wozoenda kune General> Maprofiles. Dzvanya pane iyo beta mbiri iwe yaunoda kudzima wobva wadzvanya Delete mbiri. Isu tinopinda iyo iPhone kodhi kana ikakumbirwa uye nekuenderera.
Isu tinovhura iyo iPhone Zvirongwa zveapp uye tinobata General> Mbiri uye manejimendi manejimendi. Dzvanya pane iyo beta mbiri iwe yaunoda kudzima wobva wadzvanya Delete mbiri. Pinda iyo iPhone kodhi kana uchikurudzirwa.
Iye zvino zvatine mafaera akadzimwa atinofanira reboot zvese zvishandiso uye tarisa zvakare kuvandudzwa pane ese ari maviri maApple uye neWatch app. Kuti uenderere mberi uchishandisa iyo yeruzhinji beta vhezheni yeIOS, unogona kuisa iyo beta mbiri zvakare kana zvishandiso zvako zvagadziriswa. Sezvandambotaura, iwe unogona zvakare kuchengeta iyo beta vhezheni sezvayakaiswa pane yako Apple Watch uye yako iPhone, nekuti idzi shanduro ndidzo dzekupedzisira shanduro idzo vamwe vashandisi vasina kuisa iyo betas ichave nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuisa watchOS 6 pane yedu Apple Watch
Iyo processor yeApple Watch Series 5 yakafanana neiyo Series 4
Iyo 13th beta yeTVOS XNUMX yave kuwanikwa